Momba ny voany, izao tontolo izao eran'izao tontolo izao Switzerland (WKG)
Farafaharatsiny tsy mieritreritra hazo izahay. Na izany aza, dia mihaino azy ireo isika rehefa tena lehibe izy ireo na ny onjan'ny rivotra. Mety hahatsikaritra isika raha feno ny voankazo na mandry eo am-potana ny voankazo. Ny ankamaroantsika dia azo antoka fa mamaritra ny karazana voankazo ary izany no ahafantarana ny karazana hazo.
Rehefa nilaza i Kristy fa azontsika atao ny mamantatra hazo amin'ny voany, dia nampiasa fanoharana izy izay azontsika rehetra. Na dia mbola tsy naniry hazo fihinam-boa aza isika dia efa mahalala ny voankazo azy.Mihinana ireo sakafo ireo isan'andro isika. Raha angatahina amin'ny tany tsara izy ireo, rano tsara ary zezika ampy ary misy ny fambolena faran'izay tsara, dia hamoa ny hazo sasany.
Nefa hoy izy koa dia azo ekena ny voany. Tsy noheveriny fa mitondra voan-tsolika milentika avy amin'ny vatantsika miaraka amin'ny toe-javatra mitombo tsara izahay. Fa afaka mamoa voa ara-panahy isika izay maharitra araka ny Jaona 15,16.
Inona no tiany holazaina hoe karazan'ankazo inona no tavela? Ao amin'ny Lioka 6, Jesosy dia nanokana fotoana vitsivitsy niaraka tamin'ny mpianany hiresahana azy ireo momba ny valisoa ho an'ny fitondran-tena sasany (s. koa Matio 5). Avy eo ao amin'ny andininy 43 dia nilaza izy fa ny hazo tsara dia tsy afaka mamoa voa ratsy toy ny hazo ratsy tsy afaka mamoa voa tsara. Hoy izy ao amin'ny andininy 45 fa mihatra amin'ny olona koa izany: "Ny olona tsara dia mitondra soa avy amin'ny rakitra tsara ao am-pony, ary ny ratsy fanahy mitondra ny ratsy amin'ny haren'ny ratsan'ny fony. Noho izany dia feno ny fo. izany no lazain'ny vava. »
Ny Romana 7,4 dia milaza amintsika ny fomba ahafahana manatanteraka asa tsara: «Ary ianareo koa, ry rahalahiko, dia novonoin'ny lalàna [teo amin'ny hazo fijaliana] fa tsy manana fahefana intsony ianareo] mba ho afaka iray ihany An'ny hafa, dia ilay natsangana tamin'ny maty, ka afaka mamoa voa tsara ho an'Andriamanitra. »
Tsy azoko an-tsaina hoe manana pataloha avy any an-danitra feno voankazo maina sy voatahiry i Jehovah. Saingy na izany aza, ny soa ataontsika, ny teny tsara lazaintsika ary ny "kaopy feno rano feno hetaheta" dia misy fiantraikany maharitra amin'ny hafa sy amintsika. raha hampamoahintsika isika rehetra (Hebreo 4,13).
Amin'ny farany, ny famokarana voankazo maharitra dia ny sandan'ny sandan'ny maha-marika antsika. Satria nifidy olona tsirairay tamintsika Andriamanitra ary nanao azy ireo ho zavaboary vaovao eo ambany fahasoavany, dia maneho ny fiainan'i Kristy eto an-tany isika ary mamoa ho azy. Izy io dia maharitra satria tsy ara-batana - tsy mety lo ary tsy potika. Io voa io dia vokatry ny fiainana iray naterak'Andriamanitra feno fitiavana azy sy ny mpiara-belona amintsika. Andao isika hamoa hatrany hatrany dia be izay maharitra mandrakizay!